Martin Luther - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Ny fiangonana > Martin Luther
Iray amin'ireo asa tiana indrindra amin'ny fampianarana ny tantaram-pianarana any amin'ny ivon'ny fampianarana olon-dehibe. Nandalo an'i Bismarck sy ny fampiraisana an'i Alemaina izahay vao haingana. Hoy ny boky nosoratany: Bismarck no mpitondra Alemana lehibe indrindra hatramin'ny nisian'i Martin Luther. Indray segondra aho dia nahatsapa fa nosedraina nanazava ny antony azon'ny mpikirakira teolojika toy izany no mahazo pankasitrahana toy izany, saingy avy eo dia nieritreritra izany tsara kokoa aho ary tsy niraharaha izany.
Eto dia apetraka eto indray: Nahoana ny mpivavaka iray avy any Alemana no manana toerana ambony ao amin'ny boky amerikana? Fampidirana mety amin'ny fampidirana ny iray amin'ireo olona tena mahavariana indrindra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao.
Ahoana no ahafahan'ny olona manao ny rariny amin'Andriamanitra?
Martin Luther, ny ivon'ny toetran'ny Repoblika Protestanta, dia teraka tamin'ny 1483 ary maty tamin'ny 1546. Izy dia goavam-be tamin'ny vanim-potoana manan-tantara. Machiavelli, Michelangelo, Erasmus ary Thomas Morus no niara-belona taminy; Nandeha an-tsambo i Christopher Columbus rehefa nandeha nianatra tany amin'ny sekoly latina i Luther.
Teraka tao Eisleben, tanàna tany Thuringian i Luther. Tamin'ny fotoana iray izay 60% na mihoatra ny fiainana an-jaza dia maty ny nahaterahana i Luther. Hans Luder rainy, izay mpitrandraka teo aloha, no nanao ny fanambinana ho andriana hut amin'ny fitrandrahana varahina. Ny fitiavan'i Lotera dia nanonitra azy tamin'ny fanabeazana henjana ny ray aman-dreniny izay nikarakara azy, fa voasazy tamin'ny tanana mafy ihany koa izy. Efa enina ambin'ny folo taona i Luther, ary efa nalefa tany amin'ny Anjerimanontolon'i Erfurt. Tamin'ny taona 1505, tamin'izy roa amby roapolo taona, dia nahazo ny mari-pahaizana tian'ny tompony sy ny anaran'ny filozofa izy.
Nanapa-kevitra ny rainy fa hanao mpisolovava mahay i Master Martin; tsy nanohitra ilay tovolahy. Indray andro anefa, teny an-dalana avy any Mansfeld ho any Erfurt, dia tratran’ny oram-baratra mafy i Martin. Nisy varatra nanipy azy tamin’ny tany, ary araka ny fomban-drazana katolika dia niantso izy hoe: Ampio ianao, ry Masindahy Anna, te ho tonga moanina aho! Nitana izany teny izany izy. Tamin'ny 1505 dia niditra tao amin'ny lamin'ny Hermits Augustinian izy, tamin'ny 1507 dia namaky ny lamesa voalohany izy. Araka ny voalazan’i James Kittelson (Lotera Mpanavao fivavahana), dia mbola tsy hitan’ny namany sy ny mpiara-manompo ny toetra niavaka nananan’ilay moanina tanora izay nahatonga azy ho olona niavaka toy izany tao anatin’ny folo taona fohy. Momba ny fitandremany hentitra ny fitsipiky ny lamina miaraka amin’ny fotoana fifadian-kanina sy ny fanazaran-tena, dia nilaza i Lotera tatỳ aoriana fa raha azo natao tamin’ny olombelona ny nahazo ny lanitra ho moanina, dia ho vitany tokoa izany.
Ny vanimpotoanan'i Lotera dia vanim-potoana olo-masina, fivahinianana masina ary fahafatesana maro be. Nifarana ny Moyen Âge ary ny teolojia katolika dia mbola nihemotra. Ny olo-pinoan'i Eropa dia nahita fa niharan'ny fangatahana ara-dalàna, avy amin'ny sakramenta bus, ny fiaiken-keloka ary fampahoriana nataon'ny castre pretra. Ilay tovolahy Lototista miakatra dia afaka mihira hira momba ny famonoana olona ny hanoanana, ny hanoanana sy ny hetaheta, ny fanesorana ny torimaso sy ny faneva tena. Na izany aza ny filàny ny feon'ny fieritreretana dia tsy afa-po. Ny fifehezana ara-pivavahana hentitra dia tsy nampitombo ny fahatsapany tena meloka. Fandrika ara-dalàna io - ahoana no ahafantaranao fa nahavita tsara ianao?
Na dia niaina toy ny moanina tsy misy tsiny aza izy, nanoratra an'i Lotera, dia nahatsapa izy tamin'ny alahelon'ny fieritreretana lehibe indrindra izay nieritreretana fa mpanota eo anatrehan'Andriamanitra izy. Saingy tsy afaka ny ho tia ilay Andriamanitra marina sy manasazy aho, halako kokoa ... feno fahatezerana tamin'Andriamanitra aho, raha tsy tamin'ny resaka fitenenana miafina, fa tamin'ny fitabatabana mafy, ary hoy izy: Tsy tokony ho ampy ve ny ny fadiranovana, ny fanamelohana mandrakizay dia manameloka mandrakizay amin'ny lalàna isan-karazany ambanin'ny lalàn'ny Didy Folo? Mbola mila manampy fijaliana amin'ny alàlan'ny filazantsara ihany Andriamanitra ary mandrahona antsika amin'ny fahamarinany sy ny fahatezerany amin'ny alàlan'ny filazantsara?
Ny fahitana ny marina sy ny fahatsoram-po toy izany dia efa fanaon'i Luther matetika. Ary na dia mahafantatra tsara ny tantarany sy ny tantaram-piainany izao tontolo izao - ny crusade-ny amin'ny fiangonana manokan-tena tsy manam-petra, ny fiantrana ary ny fahamarinana feno hasambarana ho an'ny asa - tsy dia vitsy ny mankasitraka fa famonoan-tena ho an'i Lotera foana izany. Tsotra be ny fanontaniany fototra: Ahoana no fomba ananan'ny olona manao ny rariny amin'Andriamanitra? Noho ny sakana nataon'olombelona rehetra izay nanakona ny fahatsoran'ny filazantsara dia nifantoka tamin'ny zavatra adinon'ny maro tao amin'ny Kristianisma i Kristy - ny hafatra fanamarinana amin'ny finoana irery ihany. Mihoatra noho ny zava-drehetra izany fitsarana izany ary tsy mitovy amin'ny fahamarinana amin'ny sekta-politika sy ny fahamarinana ao amin'ny faritra ara-piangonana.
Nanao antso avo ho fanoherana ny fombafombam-pivavahana manimba ny feon’ny fieritreretana tamin’ny androny i Lotera. Dimanjato taona aty aoriana, dia mendrika ny hijerena azy tahaka ny fahitan’ireo Kristianina namany meloka azy: amin’ny maha-mpitandrina mafana fo azy, matetika miandany amin’ilay mpanota ampahorina; amin’ny maha evanjelistra ambony indrindra amin’izay zava-dehibe indrindra dia ny fihavanana amin’Andriamanitra (Rom.5,1); amin’ny maha-mpamonjy ny feon’ny fieritreretana mijaly amin’ny raharaha mifandray amin’Andriamanitra.
I Lotera dia mety ho tsy mahalala fomba, tsy mahalala fomba toy ny tantsaha. Ny hatezerany amin'ireo izay noheveriny fa nanohitra ny hafatr'izy ireo manamarina dia mety hitranga ny loza. Voampanga ho anti-Semitism izy, ary tsy misy antony. Saingy tamin'ny hadisoana nataon'i Luther rehetra dia tsy maintsy mieritreritra ny: ny hafatra kristiana afovoany - ny famonjena amin'ny alàlan'ny finoana - dia tandindomin-doza ho lany tamingana ny Tandrefana tamin'izany fotoana izany. Nandefa lehilahy iray izay afaka namonjy ny finoana tamin'ny fanirian'ny fananana olona tsy misy fanantenana ary nampiavaka azy indray ilay lehilahy. Ny humanista sy fanavaozana Melanchthon dia nilaza tamin'ny lahateniny tamin'ny fandevenana an'i Lotera fa dokotera maloto izy amin'ny vanim-potoana marary, fitaovana ho amin'ny fanavaozana ny Fiangonana.
Fiadanana amin'ny andriamanitra
Izany no zava-kanto kristianina, hoy i Luther, nanoratra fa miala amin'ny fahotako aho ary tsy te hahalala na inona na inona momba izany, ary mitodika amin'ny fahamarinana avy amin'i Kristy ihany aho, dia fantatro tsara fa i Kristy dia midika hoe toe-panahy, fahamendrehana, tsy manan-tsiny ary fahamasinana Fantaro fa fantatro fa ahy ity vatana ity. Miaina, maty sy mitondra fiara any aho satria maty ho antsika izy ary nitsangana indray ho antsika. Tsy saro-pantarina aho, fa i Kristy kosa tsy mino. Natao batisa tamin'ny anarany aho ...
Taorian’ny ady mafy ara-panahy sy ny krizy nampahory maro teo amin’ny fiainana, dia hitan’i Lotera tamin’ny farany ny fahamarinan’Andriamanitra, dia ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny finoana (Fil. 3,9). Izany no mahatonga ny proseny mihira ny hiran’ny fanantenana, fifaliana ary fahatokiana amin’ny fisainan’ilay Andriamanitra Tsitoha, mahalala ny zava-drehetra, izay mijoro eo anilan’ny mpanota mibebaka amin’ny asany ao amin’i Kristy, na dia eo aza ny zava-drehetra. Na dia mpanota araka ny lalàna aza izy raha ny amin’ny fahamarinan’ny lalàna, hoy i Lotera nanoratra, dia tsy kivy izy, nefa tsy maty satria velona Kristy, izay sady fahamarinan’ny olona no fiainana mandrakizay any an-danitra. Tao anatin’izany fahamarinana sy izany fiainana izany no nahalalany, Lotera, tsy nanota intsony, tsy nisy fampijalian’ny fieritreretana intsony, tsy nisy fanahiana ny amin’ny fahafatesana.
Ny famirapiratan'i Lotera dia niantso ny mpanota hanambara ny tena finoana ary tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny fahasoavana mazava dia gaga sy mahafinaritra. Ny finoana dia zavatra ataon'Andriamanitra ao anatintsika. Manova antsika Izy ary haterak'Andriamanitra indray isika. Ny hery manjavozavo sy ny hery tsy miorina dia mitoetra ao aminy. Tsy afaka manao ny tsara fotsiny izy. Tsy miandry na oviana na oviana izy ary manontany raha misy asa tsara tokony hatao; nefa talohan'ny nametrahana ny fanontaniana dia efa nanao ilay hetsika izy ary mbola manohy ny fanaovana izany.
Nametraka fepetra tsy misy fepetra, fahatokisana farany amin'ny herin'ny famelan-keloka ananan'i Lotera: tsy zavatra hafa ny fampiharana ny fahatsapana fa ny olona tsy manana ota - na dia iray aza ny ota - fa ny fahotan'ny olona iray dia atsipy amin'i Kristy. Voalaza eo daholo izany. Noho ny finoana mitobaka, dia nanafika ny rafi-pahefana mahery indrindra tamin'ny androny, ny papany i Lot, ary nampihaino an'i Eoropa. Azo antoka fa, amin'ny fieken-keloka an-tsehatra amin'ny tohiny mitohy amin'ny ady amin'ny devoly, i Luther dia mbola lehilahy an'ny Moyen Orient. Araka ny filazan'i Heiko A. Oberman any Luther - Lehilahy eo anelanelan'Andriamanitra sy ny Devoly: Ny famakafakana ara-tsaina dia handroba an'i Luther amin'ny sisa amin'ny androm-pampianarana amin'ny oniversite ankehitriny.
Ilay evanjelistra lehibe
Na izany aza: Tamin'ny fanokafana ny tenany, tamin'ny fanehoana ny tolona tao anatiny, hitan'izao tontolo izao, dia nialoha ny fotoanany i Master Martin. Tsy nisalasala izy tamin'ny fijerena ampahibemaso ny aretiny sy ny fanambarana tamin-kery ny fanafodiny. Ny fiezahany hanilika ny tenany amin'ny fandinihan-tena maranitra, indraindray tsy mahafinaritra, ao amin'ny asa sorany, dia manome azy ireo fahatsapana hafanana izay maharitra hatramin'ny faharoa.1. Taonjato. Miresaka ny amin’ny fifaliana lalina mameno ny fo ny olona iray rehefa nandre ny hafatry ny Kristiana sy nandray ny fampiononana avy amin’ny Filazantsara; avy eo dia tia an’i Kristy amin’ny fomba tsy azony atao na oviana na oviana mifototra amin’ny lalàna na ny asa irery. Mino ny fo fa Azy ny fahamarinan’i Kristy ary tsy azy intsony ny fahotany fa an’i Kristy; fa ny ota rehetra dia levona amin'ny fahamarinan'i Kristy.
Inona no azo raisina ho lovan'i Lotera (teny iray izay matetika ampiasaina ankehitriny)? Teo am-panatanterahana ny iraka lehibe niatrehany ny Kristianisma tamin’ny fahazoana ny famonjena amin’ny alalan’ny fahasoavana, dia nanao fandraisan’anjaran’ny teolojia fototra telo i Lotera. Tena zava-dehibe izy ireo, satria nampianatra ny laharam-pahamehana ny feon'ny fieritreretan'ny tsirairay noho ny herin'ny fampahoriana. Izy no Thomas Jefferson an'ny Kristianisma. Any amin'ny fanjakana avaratr'i Angleterre, France sy Netherlands dia latsaka tamin'ny tany mahavokatra io idealy io; Tao anatin'ireo taonjato nanaraka dia lasa tobin'ny zon'olombelona sy ny fahalalahan'ny tsirairay izy ireo.
Tamin'ny 1522 dia navoakany ny fandikan-tenin'ny Testamenta Vaovao (Das Newe Testament Deutzsch) miorina amin'ny soratra grika Erasmus. Nametraka ohatra ho an'ny firenena hafa izany - tsy latinina intsony, fa ny Filazantsara amin'ny tenin-dreny! Izany dia nahatonga ny famakiana Baiboly sy ny fivoarana ara-panahy iray manontolo tany Andrefana - tsy lazaina intsony ny literatiora alemanina - izay nampahery be. Ny fiziriziriana momba ny Fanavaozana an'i Sola Scriptura (ny soratra masina ihany) dia nampiroborobo fatratra ny rafi-pampianarana - ary tsy maintsy nianatra namaky izy mba handinihana ny soratra masina.
Mampijaly an'i Lotera saingy amin'ny farany dia nandresy ny fieritreretana sy ny fikarohana ny fanahy, izay notanterahany imasom-bahoaka, dia namporisika ny fiaiken-keloka, fisokafana vaovao amin'ny famelabelarana ireo fanontaniana saro-pady izay tsy nahatonga ny evanjelista toa an'i John Wesley ihany, fa koa ny mpanoratra, mpahay tantara ary psikôlôjia nandritra ny taonjato vitsivitsy.
Esao ny ala sy ny tehina
Olombelona i Lehia, olombelona ihany koa. Indraindray dia ataony tsinontsinona ireo mpiaro tena faran'izay mihetsika izy. Ny fahafaham-baraka ataony amin'ny Jiosy, ny voanjo, ny Tiorka ary ny Rottengeister dia mamela ny volonao foana. Mpiady fotsiny i Luther, mpisava lalana manana famaky somotra meloka, olona maniry sy manala. Tsara ny fambolena rehefa diovina ny saha; fa esory kosa ny ala sy ny tehina, ary amboary ny saha, tsy misy olona te hanao an'izany, izy dia nanoratra tao anaty taratasy avy amin'ny fandikana, ny fanamarinanany ny fandikana ny tantaran'ny andron'ny Baiboly.
Miaraka amin'ny lafiny maizina rehetra: I Luther no mpandray anjara lehibe amin'ny fanavaozana, iray amin'ireo fiovana lehibe teo amin'ny tantara, noho ny finoan'ireo Protestanta ny fiovana taorian'ny zava-nitranga tamin'ny taonjato voalohany. Raha izany no zava-misy, raha mila mitsara olona manokana miorina amin'ny fotoanany sy ny heriny ivelan'ny fotoanany isika, ny Kristiana dia mety hirehareha fa i Martin Luther dia mijoro ho toy ny tantara ara-tantara miaraka amin'ny Otto von Bismarck.